News Collection: माया खोज्दै पोखरामा
माया खोज्दै पोखरामा
अविवाहित केटा-केटीको विवाहेत्तर सम्बन्धलाई समाजले मान्यता नदिँदा उनीहरुले कस्ता समस्या भोग्नुपर्छ ? विवाहेत्तर सम्बन्धका दुष्प्रभावहरु कस्ता हुन्छन् ? निर्देशक सुदर्शन थापा यिनै प्रश्नहरुको खोजीमा लागेका छन् । पोखरामा धमाधम सुटिङ भैरहेको सिनेमा 'के यो माया हो' मार्फत निर्देशक थापा ती सवाल उधिन्ने प्रयत्नमा जुटिरहेका छन् । गाउँबाट सहर छिर्दा केटाको समस्या र केटीको जीवनमा आएको बदलाव र चुनौतिका किस्सालाई सिनेमामा बुन्दै छन् थापा ।
एक करोड लागत दाबी गरिएको चलचित्रको अहिले पोखराको फेवाताल किनारस्थित एक होटेलमा सुटिङ् भैरहेको छ । एसजीएस इण्टरटेनमेन्ट यूनिटले तालकिनारको होटेल ताजका केही कोठाहरु भाडामा लिई चलचित्रको कथाअनुसार इण्डोर सुटिङ्गका लागि लाखौं खर्चेर सजावट गरेको छ ।
दसैंअघिदेखि नै पोखरा आएको यो यूनिटले अझै एक महिना रहेर चलचित्रको छायाँकन सक्र्ने बताएको छ । छायाँकनका लागि होटेल ताजका कोठाहरु कथाअनुसार रंगरोगन गर्नुका साथै फर्निचर तथा लत्ताकपडा लगायतका सामानहरु भाडामा लिएर चलाइएको छ । साथै अन्य श्रृंगारका लागि सामानहरु प्रायःजसो काठामाडौबाटै लोड गरेर पोखरा झिकाइएको चलचित्र निर्देशक थापाले बताए । अनुसार ४५ प्रतिशत छायाँकन इन्डोरमै हुनेछ ।
'मेरो एउटा साथी छ' प्रोजेक्टबाट निर्देशन थालेका सुदर्शनले यसअघि 'द फस्टलभ'मा पनि निर्देशकीय क्षमता देखाइसकेका छन् । तेस्रो चलचित्र 'के यो माया हो' बाट आफूले निकै आशा गरेको उनले बताए । चलचित्रमा आर्यन सिग्देल, सुष्मा कार्की, अरुणिमा लम्साल र सौगात मल्लबीच जोडी मिलाइएको छ ।सन्तोष पन्तलाई पनि चलचित्रमा देख्न सकिन्छ ।
एसजीएस अर्थात् सुरेश पहारी, गौरव हिराचन र शंकर गुरुङको लगानी रहेको चलचित्रमा गायकसमेत रहेका सुगम पोखरेलको संगीत छ । यस्तै रोशन श्रेष्ठको द्धन्द्ध, राजेश श्रेष्ठको छायाँकन, अनुप कोइरालाको नृत्य र निरज बिक्रमको पटकथा छ । आगामी बैशाख १ मा फिल्म रिलिजको आशा छ ।